အယ်ဒီတာ - အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုဆိုင်ရာနဗ်ကြောဆိုင်ရာအမြင်များ (၂၀၁၀၉) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
တပ်ဦးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2019; 10:3။
2019 ဇန်နဝါရီ 22 အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.3389 / fpsyt.2019.00003
Jung-Seok Choi,1,2, * ဒံယေလလုကာ,3 နှင့် Young-Chul Jung4
လောင်းကစားခြင်း၊ အင်တာနက်ဂိမ်းကစားခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအပါအ ၀ င်အပြုအမူအချို့သည်လူနည်းစုလူနည်းစုများအတွက်အတင်းအကျပ်ဆက်ဆံမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ တစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်ပြင်ပသြဇာလွှမ်းမိုးမှုမရှိဘဲဤအပြုအမူများကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိဟုခံစားရသောအခြေအနေများတွင်ဤအပြုအမူများသည်ပစ္စည်းမဟုတ်သောသို့မဟုတ်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုများဟုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအပြုအမူများစွာသည်အွန်လိုင်းတွင်အဓိကအားဖြင့်ကစားခြင်း၊ လူမှုမီဒီယာ၊ စျေးဝယ်ခြင်းနှင့်အပြာစာပေရုပ်ပုံများကဲ့သို့ဖြစ်တတ်ပြီးစမတ်ဖုန်းနှင့်အခြားမိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းနည်းပညာများမှတစ်ဆင့်စဉ်ဆက်မပြတ်သုံးစွဲနိုင်မှုကြောင့်မောင်းနှင်နိုင်သည်။ DSM-5 တွင်လောင်းကစားခြင်းနှင့်အင်တာနက်ဂိမ်းကစားခြင်းရောဂါ (IGD) အတွက်ရောဂါရှာဖွေခြင်းစံသတ်မှတ်ချက်များသည်ပစ္စည်းဥစ္စာသုံးစွဲမှုရောဂါနှင့်ဆင်တူသည်။ ရုပ်သိမ်းခြင်းနှင့်သည်းခံခြင်း၏လက္ခဏာများ၊ အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးဆက်များရှိနေသော်လည်းဆက်လက်သုံးစွဲခြင်းနှင့်လှုပ်ရှားမှုအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးခြင်းတို့ကိုရည်ညွှန်းသည်။ သို့သော်၊ ထိုကဲ့သို့သောအတင်းအကျပ်ဝယ်ယူခြင်းနှင့်လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများကဲ့သို့သောအပြုအမူအချို့သည် DSM-5 တွင်တိကျသောရောဂါရှာဖွေရေးအမျိုးအစားများမရှိပါ။ ပေါ်ထွက်လာသည့်အွန်လိုင်းအပြုအမူများအပါအ ၀ င်ဤအပြုအမူအများစုသည်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) ကဲ့သို့သောနိုင်ငံတကာအာဏာပိုင်များအကြားအမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုအပေါ်သုတေသနအထောက်အထားများထပ်မံတောင်းဆိုမှုများအပါအ ၀ င် ဆက်လက်၍ ဆွေးနွေးမှုများဆက်လက်ဖြစ်ပွားလိမ့်မည်။ ဤသုတေသနခေါင်းစဉ်သည်အလေ့အကျင့်စွဲလမ်းမှုဆိုင်ရာ neurobiological အထောက်အထားများ၊ လောင်းကစားခြင်း၊ အင်တာနက်ဂိမ်းကစားခြင်းနှင့်စမတ်ဖုန်းစွဲခြင်းစသည်တို့အပါအ ၀ င်အင်တာနက်အခြေပြုမသန်မစွမ်းမှုများနှင့်လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများဆိုင်ရာကွဲပြားသောစာတမ်းများကိုတင်ပြထားသည်။
အမူအကျင့်စွဲအခြေခံသော Neurobiological ယန္တရား
အမူအကျင့်စွဲနယ်ပယ်သည်ထပ်ခါတလဲလဲဖြစ်သော၊ လိုက်လျောညီထွေမှုမရှိသောအပြုအမူများကိုမောင်းနှင်စေသောအရေးကြီးသည့် neurobiological ယန္တရားများကိုအစဉ်အမြဲရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန်ကြိုးစားနေသည်။ ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲ၏တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများ, ဥပမာ, အမူအကျင့်စွဲအခြေခံ neurobiological ယန္တရားများအပေါ်သုတေသနလမ်းပြကူညီလိမ့်မည်။ အရက်သေစာသောက်စားခြင်း - စိုးရိမ်ပူပန်မှုလက္ခဏာသည်ကူးယူခြင်း၊ ဘာသာပြန်ခြင်းနှင့် synaptic shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်ပြောင်းလဲခြင်းအတွက်ဇွဲရှိရှိရေရှည်ပလပ်စတစ်ပြောင်းလဲမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသောမော်လီကျူးနှင့်ဆယ်လူလာလိုက်လျောညီထွေမှုပေါ်မူတည်ကြောင်းပြသထားသောလက္ခဏာများကိုရည်ညွှန်းသည်။ သို့သော်အီသနောရုပ်သိမ်းရေး၏ anxiogenic သက်ရောက်မှုအခြေခံမော်လီကျူးယန္တရားနောက်ထပ်လေ့လာမှုလိုအပ်သည်။ ဤခေါင်းစဉ်၏ပထမစာတမ်း၌, Hou et al။ synaptic ultrastructure ပြောင်းလဲမှုများအရက်မှီခိုအတွက်ရုပ်သိမ်းရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်ဆက်စပ်စေခြင်းငှါသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
Impulsivity သည်စွဲလမ်းမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောအရေးကြီးသောအင်္ဂါရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ချို et al ။ ကြွက်များတွင် rGT နှင့်ထိတွေ့သောအခါသက်ရောက်မှု (ဆိုလိုသည်မှာနှောင်းပိုင်းဆယ်ကျော်သက် / ငယ်ရွယ်သောလူကြီးများနှင့်ရင့်ကျက်သောလူကြီးများ) နှင့်ထိတွေ့မှုအပေါ်အသက်အရွယ်ကွာခြားချက်အားဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောသြဇာလွှမ်းမိုးမှုဘယ်လောက်ဆန်းစစ်ဖို့လောင်းကစားဝိုင်းအလုပ် (ကြွက်သားဗားရှင်း) ၏ကြွက်ဗားရှင်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ရလဒ်များအရထိုးထွင်းသိမြင်စေသောလုပ်ရပ်နှင့်ရွေးချယ်မှုသည်စိတ်ကြွဆေး၏ကွဲပြားသောရှုထောင့်များဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်ပထမ ဦး ဆုံးလောင်းကစားလုပ်ငန်းနှင့်ထိတွေ့ရသည့်အသက်အရွယ်ကြောင့်ကြွက်များတွင်ကွဲပြားမှုအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်။
အပြုအမူစွဲလမ်းမှုတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်သည့်အဓိကအာရုံကြောကွန်ယက်များထဲမှတစ်ခုမှာသင့်လျော်သောတုံ့ပြန်မှုများကိုလမ်းညွှန်ရန်အာရုံကြောကွန်ယက်များအကြား“ switching” ကိုဖြန်ဖြေပေးသည့် salience network ဖြစ်သည်။ စွဲလမ်းမှုအပြုအမူများအပေါ်စွဲလမ်းမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအားနည်းခြင်းတို့ကြောင့်စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်နွယ်သောလှုံ့ဆော်မှုများကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထူးခြားမှုကိုညွှန်ကြားရာတွင်အဓိကကျသည့်ကွန်ယက်အတွင်းပြောင်းလဲမှုများရှိသည်။ ဝမ် et al။ IGD နှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်လက္ခဏာပြင်းထန်မှုနှင့်ဆက်နွယ်နေကြောင်းတိုးမြှင့် insular cortical အထူတိုးတက်ကြောင်းသိရသည်။ အခြားလေ့လာမှုတစ်ခုမှာ လီ et al။ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ anterior cingulate cortex ၏ subregions သည် salience network ၏အခြားသော့ချက် node သည်ကွဲပြားခြားနားသောအလုပ်လုပ်နိုင်သည့်ဆက်သွယ်မှုပုံစံများကို IGD နှင့်သက်ဆိုင်သည်။
ပြInternetနာရှိသောအင်တာနက်ဂိမ်းကစားခြင်းသည်များသောအားဖြင့်စိတ်ကျရောဂါဆိုင်ရာရောဂါ (MDD) နှင့်တွဲဖက်လေ့ရှိသည်။ စိတ်ကျရောဂါသည်ပုံမှန် mode ကွန်ယက် (DMN) နှင့် salience network အတွင်းရှိအလုပ်လုပ်သောဆက်သွယ်မှု (FC) ၏ပြောင်းလဲမှုနှင့်အနီးကပ်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ ထို့အပြင် serotonergic neurotransmission သည် DMN ကိုပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့် Impulsivity အပါအ ၀ င်စိတ်ကျရောဂါ၏လက္ခဏာများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ Hong et al။ SLH LL allele အုပ်စုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် 5HTTLPR genotype အုပ်စု၏ SS allele သည် DMN နှင့်အဓိကဆက်သွယ်မှုကွန်ယက်အတွင်းနှင့် FC ကွန်ယက်များအကြားပိုမိုကြီးမားသော FC ကိုပြသခဲ့သည်။ ရလဒ်များအရ 5HTTLPR ၏ allele တိုတောင်းမှုသည် DMN နှင့်လူနာများအတွက်စိတ်ရှုပ်စေသောအင်တာနက်ဂိမ်းကစားမှုကိုပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်သည့် DMN နှင့် salience network အတွင်း FC ကိုတိုးပွားစေနိုင်သည်ဟုအကြံပြုသည်။
ကင်မ်နှင့်ကန် IGD တွင်ပါ ၀ င်ပတ်သက်သည့်ကွဲပြားသောဆုလာဘ်စနစ်များကိုစုံစမ်းခဲ့သည် ငွေကြေးဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူးအတွက် IGD အုပ်စုသည်စိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာအဓိကကျသည့်ပါဝင်ပတ်သက်သော ဦး နှောက်ဒေသများ၌ပိုမိုကောင်းမွန်သောအလုပ်လုပ်မှုဆက်သွယ်မှုကိုပြသခဲ့သည်။ ဆုလာဘ်ကွန်ယက်များ၏အလုပ်လုပ်မှုဆက်သွယ်မှုတွင်ဤကွဲပြားခြားနားမှုများက IGD သည်အားနည်းသောရည်မှန်းချက်ကို ဦး တည်သည့်အပြုအမူကိုအခြေခံသည့် neurobiological ယန္တရားများဖြစ်သည့်မက်လုံးပေးခြင်းနှင့်“ လိုချင်ခြင်း” လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်ဟုအကြံပြုသည်။
စွဲ -related တွေကိုဆီသို့အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှုကိုလည်းမက်လုံးပေး salience နှင့်ဆက်စပ်ပေမယ့် IGD အတွက်အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှု၏ pathophysiology ထိုကဲ့သို့သော compulsivity ရန်၎င်း၏ဆက်ဆံရေးအဖြစ်ကောင်းစွာ - နားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိပါ။ Kim et al။ IGD နှင့်စွဲငြိစေတတ်သောရောဂါ (OCD) တွင်အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ရန်နှောင်းပိုင်းတွင်အပြုသဘောအလားအလာ (LPP) ၏ electrophysiological အမှတ်အသားကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ IGD နှင့် OCD အုပ်စုများတွင်ရောဂါနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချက်များ (ဂိမ်းနှင့် OCD နှင့်သက်ဆိုင်သော) များကိုတုံ့ပြန်သည့် LPP များတိုးလာသည်။ ဤရလဒ်သည် LPP သည် IGD နှင့် OCD ရှိ cue-related တဏှာအတွက် neurophysiological marker ဖြစ်သည်။
Self- စည်းမျဉ်းများချို့ယွင်းမှုစွဲ၏အဓိကစိတ်ပညာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်မှုစွမ်းရည်သည်အခြေခံစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များမည်မျှကျေနပ်မှုရှိကြောင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ဤအခြေခံစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များသည်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်၊ အရည်အချင်းနှင့်ဆက်နွယ်မှုတို့ပါဝင်ပြီးတစ် ဦး ချင်းဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်ပေါင်းစည်းမှုကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသောအရေးကြီးသောအချက်များဖြစ်သည်။ အချို့သောသူများသည်အခြေခံစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ဆိုရှယ်မီဒီယာကွန်ရက်များနှင့်အင်တာနက်ဂိမ်းများကိုအားကိုးခြင်းနှင့်အလွန်အကျွံသုံးခြင်းများဖြစ်နိုင်သည်။ ကင်မ် et al ။ အခြေခံစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များနှင့်အတူသူတို့၏စိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်ပတ်သက်။ IGD နှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီ၏ပုံပျက်မိမိကိုယ်ကိုအခြေခံအာရုံကြောဆက်စပ်မှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေး။ IGD တွင်ပါ ၀ င်သူများသည်အပျက်သဘောဆောင်သောစံပြပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အမှန်တကယ် Self-image ရှိကြသည်။ Neurobiologically စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အပျက်သဘော Self- အကဲဖြတ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောယုတ်ညံ့ parietal lobule တွင်ကမောက်ကမဖြစ်မှုကို IGD တွင်တွေ့ရှိရသည်။ IGD သည်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင်မကြာခဏဖွံ့ဖြိုးတတ်သည်ကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းဖြင့်၎င်းကိုယ်တိုင်၏အယူအဆပြproblemနာကိုသင့်တော်သောကုထုံးနည်းလမ်းများဖြင့်မှတ်သားပြီးကိုင်တွယ်သင့်သည်။
Neurobehavioral phenotypes ကို epigenetically microRNAs (miRNAs) အပါအဝင် non-coding RNAs ကထိန်းချုပ်ထားတယ်။ miRNAs ကိုသွေး (ပလာစမာသို့မဟုတ်သွေးရည်ကြည်) တွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သောကြောင့်၊ ပျံ့နှံ့စေသော miRNAs သည်အာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါမမှန်မှုတွင်ထိုးဖောက် ၀ င်ရောက်ခြင်းမရှိသော biomarkers များကဲ့သို့တိကျသောအားသာချက်ရှိသည်။ Lee က et al ။ အဆိုပါ IGD နှင့်ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုများအကြား differential ထုတ်ဖော်ပြောဆိုပလာစမာ miRNAs စောင့်ကြည့်ခြင်းဖြင့်ဖော်ထုတ် IGD- ဆက်စပ် miRNA အမှတ်အသားများ။ miRNA စကားပြောပရိုဖိုင်းနှင့်လွတ်လပ်သောအတည်ပြုမှု၏မျိုးရိုးဗီဇ - ကျယ်ပြန့်စိစစ်မှတဆင့်သုံး IGD-ဆက်စပ် miRNAs (hsa-miR-200c-3p, hsa-miR-26b-5p, နှင့် hsa-miR-652-3p) ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ miRNA သုံးမျိုးစလုံး၏ထိန်းချုပ်မှုလျှော့ချထားသူများသည် IGD ကိုအလွန်အန္တရာယ်များသည်။
အလိုအလျောက်အာရုံကြောစနစ် (ANS) ၏ကမောက်ကမဖြစ်မှုသည်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုနှင့်လည်းဆက်စပ်နေသည်။ အဆိုပါ ANS homeostasis ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ပြည်တွင်းရေးနှင့်ပြင်ပလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်သကဲ့သို့, ၎င်း၏ function ကိုအပြုအမူမဟာဗျူဟာများတွင်သပ္ပါယ်ချိန်ညှိဖို့နီးကပ်စွာဆက်စပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ANS ၏ကမောက်ကမဖြစ်မှုသည်ဂိမ်းကစားခြင်းကိုထိန်းချုပ်ခြင်းဆုံးရှုံးမှု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ထိန်းသိမ်းမှုကိုအထောက်အကူပြုသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် IGD ရှိသူများသည်ဆိုးကျိုးများရှိသော်လည်း၎င်းတို့၏အပြုအမူဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာများကိုမပြုပြင်နိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ANS function ကိုနှလုံးခုန်နှုန်းပြောင်းလဲနိုင်မှု (HRV) ကိုတိုင်းတာခြင်းဖြင့်ထိုးဖောက် ၀ င်ရောက်ခြင်းကိုအကဲဖြတ်နိုင်သည်။ Hong et al။ IGD နှင့်ပါ ၀ င်သူများသည်အကြိုက်ဆုံးအွန်လိုင်းဂိမ်းကစားနေစဉ်ကြိမ်နှုန်းမြင့်နှလုံးခုန်နှုန်းပြောင်းလဲနိုင်မှုကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုပြသခဲ့သည်။ သူတို့၏ရလဒ်များအရသတ်သတ်မှတ်မှတ်ဂိမ်းကစားခြင်းအခြေအနေများအပေါ် HRV တုံ့ပြန်မှုသည်ဂိမ်းစွဲလမ်းမှုပုံစံများနှင့်ဆက်စပ်နေပြီးအင်တာနက်ဂိမ်းများကစားနေစဉ် IGD ရှိသူတစ် ဦး ချင်းစီ၏အလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုအားလျော့နည်းစေသည်။
စမတ်ဖုန်းအသုံးပြုမှုနှင့်အသုံးပြုမှုလျင်မြန်စွာကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှစမတ်ဖုန်းအသုံးပြုမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုပိုမိုစိတ်ဝင်စားလာကြသည်။ Chun et al ။ စမတ်ဖုန်းအလွန်အကျွံသုံးစွဲမှုနှင့်ဆက်စပ်သောပြောင်းလဲထားသော ဦး နှောက်ဆက်သွယ်မှုနှင့်ရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာများ၊ cortisol ပြင်းအားနှင့် frontostriatal ဆက်သွယ်မှုများအကြားဆက်နွယ်မှုကိုစစ်ဆေးခဲ့သည်။ စမတ်ဖုန်းအလွန်အကျွံသုံးစွဲမှုများသောဆယ်ကျော်သက်များသည်ဤဒေသများ၌သိမြင်မှုထိန်းချုပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောဆက်သွယ်မှုကိုလျှော့ချထားကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထို့အပြင်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုဆုတ်ခွာခြင်းလက္ခဏာများသည် cortisol လျှို့ဝှက်ချက်ကိုထုတ်ဖော်ပြသသောကြောင့်ဤစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုသည် Frontostriatal ဆက်သွယ်မှုကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ ဤရလဒ်သည်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင် ဦး နှောက်၏အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းကိုစမတ်ဖုန်းများအလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုအရေးကြီးသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုပေးသည်
ဂိမ်းနှင့်လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာရောဂါ (CSB) ရောဂါသည်မကြာသေးမီကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရောဂါများ (ICD-11) တွင်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ သို့သော် WHO ကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာရောဂါကိုတွန်းအားပေးသောထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ဂိမ်းပြသခြင်းသည်စွဲလမ်းစေသောရောဂါများတွင်ပါဝင်သည်။ Seok နှင့် Sohn ပြproblemနာ hypersexual အပြုအမူနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီစွဲလမ်းမမှန်ခြင်းနှင့်ထကြွလွယ်သောထိန်းချုပ်မှုရောဂါနှစ်ခုလုံးကိုဖြတ်ပြီး shared အဓိကအင်္ဂါရပ်ဖြစ်သောလက်ျာ dorsolateral prefrontal cortex အတွက်အလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ချို့ယွင်းလုပ်ဆောင်ချက်ကိုလျော့နည်းစေပြီတွေ့ရှိခဲ့ ဖြည့်စွက်ကာ, Gola နှင့် Draps CSB မက်လုံးပေး salience ၏သီအိုရီ၏ထောက်ခံမှုအတွက်, ခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှု၏မျှော်လင့်နေစဉ်အတွင်းတိုးမြှင့် ventral striatal တုံ့ပြန်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည် သူတို့ကဒီရောဂါနှစ်ခုအတွက် neurobiological ကွဲပြားခြားနားမှုဆနျးစစျဖို့နောက်ထပ်လေ့လာမှုများဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။
neurobiological ဆက်စပ်မှု၏ longitudinal အပြောင်းအလဲများအမူအကျင့်စွဲအတွက်ဆက်နွယ်နေကြောင်း
ဤသုတေသနခေါင်းစဉ်သည်ရှည်လျားသောဒီဇိုင်းများကိုအသုံးချသည့်ဝတ္ထုလေ့လာမှုများစွာကိုတင်ဆက်ထားသည်။ Lee et al ။ ရဲ့ IGD မှပြန်လည်နာလန်ထူလာစေရန်မြှင့်တင်ပေးသည့်အာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်များကိုဖော်ထုတ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ IGD ရှိသူများသည် ၆ လကြာနောက်ဆက်တွဲစစ်ဆေးမှုတွင်တိုးတက်မှုမရှိသေးသောသူများသည်ပိုမိုရှုပ်ထွေးသောဖြစ်ရပ်များတွင်ဂိမ်းပြproblemsနာများကိုအလိုအလျောက်ဖြေရှင်းရန်နည်းပါးကြောင်းပြသပြီး၊ ကျူးကျော်မှုနှင့်အန္တရာယ်ကာကွယ်မှုအဆင့်များကိုအကဲဖြတ်ခြင်းသည် IGD ၏လမ်းကြောင်းကိုခန့်မှန်းရန်ကူညီလိမ့်မည်။
ပန်းခြံ et al။ အနားယူ - ပြည်နယ် electroencephalography (EEG) ကွက်တိဝင်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းကိုအသုံးပြု။ IGD နှင့်အတူလူနာအတွက်ကုသမှုတုံ့ပြန်မှုနှင့်ဆက်စပ်အာရုံကြောဆက်သွယ်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေး။ ကျန်းမာသောထိန်းချုပ်မှုများ (HCs) နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက IGD ရှိလူနာများသည် beta နှင့် gamma intrahemispheric coherence တိုးမြှင့်မှုကိုပြသခဲ့ပြီးညာဘက် hemisphere ၏မြစ်ဝကျွန်းပေါ် intrahemispheric ကွက်တိဝင်မှုအားအခြေခံရှိခဲ့သည်။ ရွေးချယ်သည့် serotonin ပြန်လည်ထိတွေ့မှုကိုတားဆီးသည့်ဆေးများအပါအ ၀ င် ၆ လကြာကုသမှုပြီးနောက် IGD ရှိလူနာများသည်အခြေခံနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် IGD လက္ခဏာများတိုးတက်မှုရှိကြောင်း၊ သို့သော်သူတို့သည် HCs များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် beta နှင့် gamma intrahemispheric ကွက်တိဝင်မှုတိုးလာသည်ကိုဆက်လက်ပြသခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်သိသိသာသာသာ။ ကြီးမြတ် intrahemispheric အစာရှောင်ခြင်းကြိမ်နှုန်းကွက်တိဝင် IGD ၏အရေးကြီးသော neurophysiological ရိုအမှတ်အသားဖြစ်နိုင်သည်။
ဒီသုတေသနခေါင်းစဉ်မှာလေ့လာမှု၏နောက်ဆုံးအမျိုးအစား neurobiological ရောဂါရှာဖွေရေးနှင့်ကုသမှုချဉ်းကပ်ပါဝင်ပတ်သက်။ ကင်မ် et al ။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်များတွင်အန္တရာယ် / ပြInternetနာအင်တာနက်အသုံးပြုမှု (ARPIU) ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းရာတွင်အပြုအမူ၊ စိတ်ထားနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်များ၏နှိုင်းယှဉ်တန်ဖိုးကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည်။ ယောက်ျားလေးများကြားတွင်အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုပြင်းထန်မှုသည် 2D: 4D digit ratio နှင့်အသစ်တီထွင်မှုများနှင့်ပြောင်းပြန်ဆက်စပ်နေပြီးစိတ်ကျဝေဒနာရမှတ်များကိုထိန်းချုပ်သည့်အခါဆုလာဘ်မှီခိုမှုရမှတ်များနှင့်အပြုသဘောဆောင်သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဤဆက်ဆံမှုများကိုမိန်းကလေးများတွင်မတွေ့ရှိရဘဲလူငယ်များတွင် ARPIU ကိုတားဆီးရန်ကျား၊
ကစက္ကူ Kim နှင့် Hodgins အမူအကျင့်နှင့်ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုစွဲခြင်းတို့၏အခြေခံတူညီချက်ကိုစွဲလမ်းစေသောစွဲလမ်းမှု၏ transdiagnostic ကုသမှုပုံစံကိုအဆိုပြုထားသည်။ ၎င်းတို့၏မော်ဒယ်တွင်အစိတ်အပိုင်းများ၏အားနည်းချက်များကိုမီးမောင်းထိုးပြသည်။ တစ်ခုချင်းစီတွင်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုဖြစ်နိုင်ချေများပါဝင်သည်။ ၎င်းတို့မှာလှုံ့ဆော်မှုကင်းမဲ့ခြင်း၊ အရေးတကြီးလိုအပ်မှု၊ လိုက်လျောညီထွေမှုမရှိသောမျှော်မှန်းချက်များ၊ ချုပ်တည်းမှုလိုငွေပြမှုများ၊ ဤခေါင်းစဉ်နှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားစာတမ်းတွင် Blum et al။ “ တိကျသောစွဲလမ်းမှုစီမံခန့်ခွဲမှု” (PAM) ™ - မျိုးရိုးဗီဇစွဲရောဂါအန္တရာယ်ရမှတ်စစ်ဆေးမှုရလဒ်အပေါ် အခြေခံ၍ အာရုံခံအာဟာရဖြည့်စွက်ခြင်း၊ နောက်ဆုံးတော့ ဘေ et al။ IGD နှင့်လောင်းကစားရောဂါများအတွက်ကုသမှုပုံစံတစ်ခုအဖြစ် bupropion ကိုစစ်ဆေးခဲ့သည်။ Bupropion သည် IGD နှင့် GD နှစ်ခုစလုံးတွင်ပြproblemနာအပြုအမူများတိုးတက်စေရန်ကတိပေးခဲ့သည်။ သို့သော်ထိုအုပ်စုနှစ်ခုလုံးတွင်ကွဲပြားသောဆေးဝါးဗေဒပြောင်းလဲမှုရှိခဲ့သည်။
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်တင်ပြထားသည့်မူရင်းဆောင်းပါးများသည်ကွဲပြားခြားနားသောသုတေသနအစီရင်ခံစာများနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်သည့်ဆောင်းပါးများနှင့်အတူ neurocognitive, neurophysiological, neurochemical နှင့် neuroimaging research နည်းစနစ်များကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လွှမ်းခြုံထားသည်။ အတူတူဤဆောင်းပါးများတစ် ဦး neurobiological ရှုထောင့်ကနေအပြုအမူစွဲ၏လေ့လာမှုရှင်သန်ဆက်လက်နှင့်ဤinရိယာ၌ငါတို့နားလည်မှု, အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ဤအခြေအနေများကြောင့်တစ် ဦး ချင်းစီ၏ကုသမှုကိုတိုးတက်စေလိမ့်မည်ဟုဤareaရိယာ၌များစွာသောစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်တိုးတက်မှုရှိလိမ့်မည်ဟုဆက်လက်ပြသသည်။
စာရင်းအားလုံးစာရေးဆရာများအလုပ်တစ်ခု, သိသိသာသာတိုက်ရိုက်နှင့်အသိပညာဆိုင်ရာအလှူငွေကို လုပ်. , ထုတ်ဝေရန်ကအတည်ပြုပြီ။
ရန်ပုံငွေရှာခြင်း။ ဤလုပ်ငန်းကိုကိုရီးယားအမျိုးသားသုတေသနဖောင်ဒေးရှင်းမှထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည် (Grant No. 2014M3C7A1062894; J-SC) ။ DK သည်သြစတြေးလျသုတေသနကောင်စီ (ARC) မှငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးသော Discovery အစောပိုင်းအလုပ်ရှာဖွေရေးသုတေသီဆု (DECRA) DE170101198 ထံမှဘဏ္supportာရေးအထောက်အပံ့ကိုရရှိခဲ့သည်။